Tattoo-biyaha - Tilmaamaha ugu badan ee biyaha laga helo ee ragga iyo dumarka
Watercolor Tattoo Tattoo Design Ideas for ragga iyo dumarka
Macnayaasha macmacaanka biyaha
Sida quruxda guud, qaababkaasi waxay calaamad u yihiin macnaha kuwaas oo sidoo kale si siman u jilicsan. Tattogga wuxuu noqon karaa calaamad xasuusta, sooyaalka qofku aaminsan yahay, muujinta jacaylka aan u hayno kuwa soo mara ama qaab sawir ah. Noocyada ugu caamsan ee shaati-biyoodka biyuhu waa kuwa shimbiraha iyo cayayaanka.
Tilmaamo biyo ah oo biyo ah oo muujinaya nolosha, rajada, metamorphosis iyo rebirth ayaa badanaa la isticmaalaa. Talefoono biyo ah oo la mid ah sida Rose waxay muujisaa jacayl iyo qurux, halka ay lotus muujinayso daahirsanaanta. Mid ka mid ah tattoosyada ubaxa ee ugu caansan waa waa daffodil oo dabaylaya dabaysha, taas oo calaamad u ah in la sii daayo khalkhalka nolosha iyo xorriyadda.
Farshaxanka Abstract waa mid caadi ah oo taatu dejinta biyaha lagu qabsado. Isku-darka iyo kala-soocida midabada waxay ka dhigan tahay dareenka, fikradaha ama xitaa ra'yiga. Macnayaasha qaababka kala duwan ayaa loo tarjumay si ka duwan dadka indhaha la '.
Wareegtada Haweeneyda Tattoo Design For Women
Sawir-celin-celinta biyaha ee gabdhaha
Gogol-biyoodka biyaha ayaa dib loogu celiyaa gabadha
Tilmaamaha biyaha ee biyaha ee gabdhaha - Qeybta 1
Tilmaamo gacmood oo biyo ah oo loogu talagalay gabdhaha - Qeybta 2
Dumarka biyaha laga dhejiyo ee dumarka
Dumarka barkada midabka bacdi ku dhajiya ee haweenka
Tilmaamaha dhedigga biyaha ee gabdhaha
Midabada biyaha ee dhabarka dhabarka ee gabdhaha
Tilmaamaha barafka biyaha ee gabdhaha
Midabada biyaha ayaa horay uugu duubay gabadha
Midabkeedu wuxuu ka yimaadaa jilbaha garabka bidix ee gabdhaha
Dumarka suunka lagu qaado ee dumarka
Nooca Biyaha Tattoo ee Nimanka
Tilmaamaha boodboodka biyaha ee ragga
Tilmaamaha midab-boodboodka biyaha ee ragga
Lugaha suunka lugaha ee ragga
Tilmaamo gacmeed oo biyo ah oo ragga ah
Sanduuqyada biyaha ee feeraha ee ragga
Dharbaax biyaha lagu duubo oo loogu talagalay ragga
Meeleynta habboon ee shaati-biyoodka biyaha
Meeleynta meeleynta suuliga tattoo waa muhiim sida xulashada naqshadda saxda ah. Goobta tattoo ku xiran tahay cabbirka tattoo. Tilmaamo badan ayaa u muuqda kuwo wanaagsan marka la dhigo meelo dusha sare leh sida dhabarka, caloosha, feeraha, lugaha iyo garabka, halka tattoosyada yar yar ay ku habboon yihiin meelaha yaryar sida canqowga, curcurka, dhabarka, dhabarka dhegta iyo xitaa faraha.
Dadka qaarkiis waxay leeyihiin xayiraad bulsho iyo xirfad ah si ay u soo galaan. Dadka badankood oo noocan ah, dhar-gooyooyinka meelaha ku yaala si fudud ayaa loo dabooli karaa sida torso, hawdka.
Tilmaamaha biyaha xaydha ayaa si dhakhso ah u xoqaya haddii aan si haboon loo daryeelin. Tani waxay inta badan ka dhigan tahay in laga ilaaliyo in laga ilaaliyo iftiinka qoraxda iyo helitaanka taabashada markii ay lagama maarmaan tahay muhiim. Dufanka biyuhu waxay u egyihiin ugu fiican maqaarka hareeraha sida dabeecadda iftiinka ee khadka tattoo ayaa xitaa ka dhigi doonta qaabka tattooing. Waxaa ugu fiican in la doorto aagga daboolan ama aan la taaban karin ee loogu talagalay tattooing.
Talooyinka diyaarinta ee helitaanka tattoo
Waxyaabaha qaddariya ee la xusuusnaado ka hor intaysan helin tattoo waa:
Si aad u cuntid raashin sax ah ka hor intaadan u tegin tattooing sida jirka waxay u baahan tahay tamar si ay u bogsato dhaawaca tattoo iyo sidoo kale in laga hortago gaajo marka fadhiyada fadhiga ka dheer yahay. Iska ilaali inaad biyuhu ku filan wakhti dhan.
Xiro dhar aad u roon in la saaro ama la jiido iyadoo ku xiran aagga si aad u noqoto mid tattooed.
Isu diyaari dhammaan waxyaabaha ku xusan xannaanada kaddib marka loo baahdo tattooing sida boogaha lidka bakteeriyada ama faashadda. Waxaa ka wanaagsan in aad wax ka weydiiso kahor intaanad dooneynin dhamaan waxyaalaha lagama maarmaanka ah ee la iibsado.
Noocyada tattoos biyo ah
Sodobada biyaha waa nooc ka mid ah naqshadaha tattoo ee laga abuuray dhajinta iyo xoqida midabada. Midabada kala duwan ee midabada loo isticmaalo wuxuu ka dhigayaa mid aad u soo jiidasho leh. Iyada oo qaababka kala duwan ee loo heli karo, tilmaamidda kala soocidda waa caqabad. Laba nooc oo kala duwan oo kala duwan ayaa lagu sifeeyay iyada oo ku saleysan helitaanka saldhigga madow ee asalka ah.
Tattoos Biyaha oo aan lahayn saldhigga madow -
Talefoonka biyo-biyoodka oo aan lahayn saldhig madow ayaa lagu sawiraa sida naqshadeynta tattoo iyada oo aan lahayn madadaalo madow ama shaqo khad. Soo saarista sawirada oo u eg sida rinjiga biyaha. Noocyada noocan oo kale ah oo ah shaati-baro ayaa leh dhinacyo jeexan oo u muuqda sida isku biirida maqaarka waxayna adagtahay in la kala saaro. Waxay badiyaa ku tiirsan tahay midabada dhalaalaya ee naqshadeynta si ay uga dhigto mid raaxo leh.
Tattoos-barkhada biyaha ee saldhigga madow
Talefoonka biyo-biyoodka leh saldhigga madow waxa ay naqshadeeyeen shaqo qadka ah. Midabaynta ayaa markaa lagu sameeyaa shaqadan. Shaqada xariiqa qallalka ayaa bixisa saameyn sare oo isbarbardhigaya kuwa aan lahayn saldhigga madow. Inta badan tattooists waxay ku hayaan saldhig madow laba sababood. Sababta koowaad waa kartida aasaasiga madow ilaa da'da si tartiib tartiib ah iyo tan labaad waxay noqoneysaa mid aan khibrad u lahayn tattooist in la keeno naqshado aan lahayn xuduudaha madow.
Noocyada Tartoo biyaha ee caan ah
Tartanka jimicsiga Floral Watercolor- Tattoos-ka biyaha laga helo ayaa ugu caansan marka ay timaado midabada iyo qaababka firfircoon. Sawirada ugu badan ee la abuuray waxay ka mid yihiin qaboobaha, lotus, gabbaldayaha, daffodils, tulips, ubaxyo iyo ubaxyo. Kuwani waxay noqonayaan mid ubaxyo ah ama farabadan oo ku siinaya muuqaal cajiib ah.
Tilboortiyada biyaha lagu dubo- Butterflies waa ku haboon tahay in loo isticmaalo sida sawirada biyaha lagu dhajiyo sida ay kuwani leeyihiin qaabab firfircoon oo muuqaal farshaxan leh. Tattooist wuxuu isku dhejin karaa midabyo kala duwan waxaana lagu sameyn karaa qaabab midab gaar ah.
Tinfiidh biyo ah oo biyo ah- Tinfadhka biyaha dufcadu waxay u egtahay in aad u jilicsan tahay jirkaaga sidey u egtahay qurux wanaagsan oo soo jiidanaya oo soo jiidasho leh. Isku-dhafka midabada kala duwan ee dhinacyada hoosta ayaa ku siinaya muuqaal asal ah.
Lakabyada biyaha lafdhabarta ah ee wolf- Talefoonada biyaha lafdhabarta ah waa nooc kale oo caan ah oo ay doorbidaan dad badan. Waxay ka duwan tahay laytooska caadiga ah ee boodhka, tattooska biyaha daadadku wuxuu saameyn ku yeelan karaa naqshadeynta naqshadaynta taasoo u sahlaysa kuwa indha indheynaya.
Talefaha biyaha biya ah- Tattoo balka waa naqshad kale oo tafaasiil ah sida uu leeyahay tayada socota. Saadaalinta tattoo kalluunka biyaha leh oo saameyn ku leh ayaa ka sii daraya isticmaalka midabada dhalaalaya iyo xayawaanka.
Tummusbird tattoos- Tundhumaha Hummingbird waa waxyaabo qurux badan oo abuuraya maaddaama ay baalasheeda ku xirto xawaare sarreeya, taas oo saameyn xun ku leh dhaqdhaqaaqa iyo si sahlan oo loo sameeyo tattoo biyo ah.
Siyaabaha looga hortago in si dhaqso ah loo toqiyo loona yaqaan tattoos biyo
Dufanka biyaha biyahu waxay u nugul yahiin dheellitirka isbarbardhigga sawirada caadiga ah. Isticmaalka midabada iftiinka ah ee lagu dhajiyo tattoosku waxay sii kordhineysaa murugada si deg deg ah. Tartanka murqaha biyaha ee tartiib tartiib ah marka si wanaagsan loo hubiyo dayactirka. Tan waxaa ka mid ah:
Dooro sawirka saxda ah - Farshaxan leh waayo-aragnimo badan oo ku saabsan qaabka tattooing ayaa hubin doona in tattoo laga sameeyo farsamooyinka ka hortagaya hoos u deg deg ah. Had iyo jeer dooro tattooistkaaga si caqli ah adigoo weydiiya inay siiyaan shaybaar ka mid ah shaqooyinkoodii hore. Tattusist qibrad yar ma dhigi karo tattoos biyoodka maadaama ay u baahan tahay muuqaal gaar ah iyo muuqaal farshaxan.
Ka fogow qoraxda - Nalalka qoraxdu waxay saameyn xun ku yeeshaan da'da iyo sidoo kale tattoos cusub. Soo-gaadhista joogtada ah ee tattoo ee qorraxdu waxay keeni doontaa in si deg deg ah loo qaboojiyo. Isticmaalida kareemada qorraxda sare ee xoogga leh si aad u xakameyso saamaynta iftiinka qorraxda ee tattooadaada ayaa lagula talinayaa. Leylinta dhar-xidhka adigoo dharka u gashanayo waxay sidoo kale ka caawineysaa kahortaga in ay hoos u dhacaan.
Ka ilaali maqaarka caafimaadka - Quruxda tattoo waxay sii socon kartaa waqti dheer marka maqaarka uu abuuro uu yahay mid caafimaad qaba. Cunto nafaqo leh, hooris ku filan iyo hurdo tayo leh ayaa door weyn ka ciyaara si loo hubiyo jiritaanka tattoo
Qoyaan - Noociyaha qashinka nadiifiya ayaa lagama maarmaan u ah ka hortagga maqaarka, xoqista iyo dhimista maqaarka oo si fiican u biyo raaci. Isticmaalka cadarnaanta tayo sare leh oo tayo fiican leh ayaa kaa caawin doona bogsashada degdegga ah ee tattoo iyo si looga hortago hoos u dhaca.
Iska ilaali xoqidda - Tattoos ee meelaha u nugul xoqitaanka badanaa waxay keeni doontaa in si dhakhso ah loo qabsado ee shaati-galada. Waxaa lagu talinayaa in laga hortago dhar-xidhka cagaha ama lugaha.
Sawirrada biyaha waa la sameeyaa iyada oo aan jirin qaabab habboon marka la barbardhigo tattoos-dhaqameedka kaas oo u baahan ujeedo habboon iyo midabo. Sawirada biyaha waa la siinayaa fannaaniinta xoriyadda si wax loo abuuro naqshado gaar ah oo la midab ah midabada. Tilmaamaha biyaha dhaadheer ee dhammaan naqshadaha waa la sameyn karaa, tattooist wuxuu leeyahay xirfad khabiir ku ah taatuuga biyaha.
Tags:sawirada gabdhaha sawirrada ragga tattoo biyo ah
tattoos cagtataraagada kubbaddagadaal u laabonaqshadeynta mehndiku dhaji tattoostattoo biyo ahtattoo indhahatattoos qoortaarrow TattooJoomatari Tattoostattoos sleevetattoos taajkiitattoos ubaxtattoo maroodigatattoo dheemantattoo ah octopusjimicsiga bisadahashimbir shimbirtattoos qabaa'ilkatattoos qosol lehtattoos qorraxdasawirada malaa'igtakoi kalluunkasawir gacmeedtattoos moonsawirrada raggalammaanahalaabto laabtashaatiinka shiidanTattoo infinityTartoo ubax badantattoos eagletattoos iskutallaabtasawirada gabdhahagaraacista gacmahaTattoo FeatherTilmaamta jaalaha ahcalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahTattoos Wadnahahenna tattoowaxay jecel yihiin tattoostattoos gacantawaxaa la dhajiyay tattooslibto libaaxfikradaha tattootattoo tilmaantattoosDhaqdhaqaaqamuusikada muusikadatattoos saaxiib saxa ah